mozika Archives - Book News Madagascar
Tous les articles marqués “mozika”
Tarika Ambondrona – Namorona ranomanitra vaovao
Mivoatra hatrany ny tarika Ambondrona. Tsy amin’ny sehatry ny mozika ihany. Namorona ranomanitra izy ireo ka ny anarany dia nampitondrainy ny lohatenin’ireo hira tena nahafantarana azy ireo.
Mahakasika ny daholobe ny fifidianana. Voakasik’izany avokoa rehefa olona mihoatra ny 18 taona, na mpiasa birao, na mpitondra fiara, na mpivarotra, eny, na mpanakanto aza... Nanapa-kevitra ny handray andraikitra manoloana izany ny mpanakanto malagasy.
Publié août 9, 2017 par Tiasoa
Hanavao ny hiran'ny rainy i Lalatiana. Izay no fampanantenana nataony tamin'ny taon-dasa.
Maika ny fiverenana amin'ny fototra maha-malagasy
Publié juillet 31, 2017 par Tiasoa
“Tsy liana amin’ireo kilalao sy hira nentim-paharazana intsony ireo tanora mipetraka an-tanan-dehibe. Ny kolontsain’ireo vahiny no manjaka. Tsy hita taratra amin’ny andavanandrom-piainan’izy ireo ny maha malagasy”.
Feno 25 taona ny hetsika "Manala azy vita bacc"
Publié juillet 24, 2017 par Tiasoa
Efa mahazatra sy fanao isan-taona ny hetsika "Manala azy vita baka" miaraka amin'i Olombelo Ricky. Ankehitriny, 25 taona izao no nisiany ary mbola mahasarika tanora maro hatrany.